15 | October | 2020 | QEERROO
Qabsoon Oromoo xiyya fiigaa finiinaa ta’uu qaba, qabsoon xiyya taanan siyyaasni garboonfataa irratti haboo godhachuu hindanda’u. Kanaaf qabsoon keenyas qabsoo xiyyaa ta’uu qabdi malee qabsoo geengoo ta’uun hinmalle. Oromoon qabsoo isaa galii biraan gahee fashalsa kun ammoo qabsoo ofii kunuunfachuu dadhabuu Oromoo irraa madda. Qabsoon keenya humna guddaa cabsee humna xiqqaan injifatama. Seenaa keessattis Oromoon “utuu” jechaa akka hafu kan taasise kanuma. Oromoon tokkummaan qabsoo taligee asiin gahate kana maayii irraan gahatee fashalsuu hinqabu. Qabsoo isaa kana firii qabsoo isaa bu’achuu qaba. Firii qabsoo isaa kana bira hanga gahutti fiixee Bilisummaa irraa of darbee kaayyoof akeeka isaa dagatee of balleessuu hinqabu. Mootummaan siyyaasa garaagaraa siyyaaseessuu danda’a, siyyaasni mootummaa akka nama Sololi’aaf kiyyoo kiyyeessuuti. Namni Sololi’aaf kiyyoo qopheessu jalqaba afaan Sololi’aa shaakala. Akka isheen fooriccee wal waamtutti akkeessa. Akkeessa dheeraa booda ishuma fakkaatee bosona seena. Bosona keessattis sagalee Sololi’aa dhageessisa. Akkumasheetti sagalee kuullatee fooricoon waama. Fooricoon waamamtee yoo dhufuushee argu dhokatee kiyyoosaa kiyyeessee midhaan ykn waan nyaatamu sana kiyyootti facaasee fuulduratti kuta. Sololi’aan garraamiin midhaan nyaachuutti nyaattee nyaatamti. Qeerroon akkasiiree? Miti. Qeerroon kaayyoof akeeka ABO ganamaa galiin gahuuf carraaqu: hubataadha, abshaala, gamna,aqila, haxxeedha, hinkiyyeeffamu. Continue reading →
Waamicha Hiriira Deeggarsaa Mootummaa Ce’umsaa Biyyoolessa Oromiyaa.